ထိုင်းဗီဇာဧ။် အနည်းအကျဉ်း – Giant's Web
© 2016. Powered by WordPress. Created by Zox Zin Min	ထိုင်းဗီဇာဧ။် အနည်းအကျဉ်း
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ ရံဖန်ရံခါလည်ပတ်လေ့ရှိတဲ့ နိုင်ငံကတော့ အိမ်နီးချင်း THAI နိုင်ငံပါ။ လိုချင်တာအကုန်လုံးလိုလိုရနိုင်သလို ပျော်ရွှင်စရာနေရာတွေကလဲ များပါတယ်။ စရိတ်စကကလည်း တခြားနိုင်ငံတွေထက်စာရင် အများကြီးသက်သာပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်လည်း ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာ အားသာမှုတွေရှိပါတယ်။
တချိန်တုန်းက အချိန်မရွေး၊ အရေအတွက်မရွေး Thai Visa ကိုလွယ်လွယ်ကူကူ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ပတ်စ်ပို့တ်စာအုပ်ကိုလက်မှာကိုင်ပြီး သံရုံးမှာဖေါင်ယူ၊ ပြီးရင်ဖြည့်၊ ဗီဇာကြေးသွင်း၊ ဒီနေ့ထားခဲ့ရင်နောက်နေ့ရပါပြီ။ ဒါပေမယ့်အခုတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျ။ ထိုင်းဗီဇာကို အခုမှစယူတဲ့သူတွေအတွက် တော်တော်လေးကို ခက်ခဲသွားပါပြီ။ အရင်ကထိုင်းနိုင်ငံကို သွားဖူးခဲ့မယ်၊ ထိုင်းဗီဇာတုံးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဗီဇာကြေး 35$ သွင်းပြီးလွယ်လွယ်ကူကူ ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ အခုမှစတင်ထိုင်းဗီဇာလိုချင်သူတွေအတွက် (ပတ်စ်ပို့တ်စာအုပ် အသစ်သမားတွေအတွက်) ကတော့ အတော့်ကိုခက်ခဲပါတယ်။
အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့မဟုတ်) ကားပိုင်ဆိုင်မှုကို သံရုံးကပြခိုင်းပါတယ်။ စာချုပ်တင်ပြလို့မရပါဘူး။ အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုဂရံကိုပါ ပြရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်ပတ်မှုရှိနေတဲ့ ဘဏ်စာရင်းစာအုပ်ကို ပြရပါတယ်။ (အခုမှစဖွင့်တဲ့ ဘဏ်စာရင်းစာအုပ် မဖြစ်ရပါဘူး) ဒါမှမဟုတ် ကုမ္မဏီဝန်ထမ်းဆိုရင် (BOARD OF DIRECTOR) ဖြစ်ကြောင်း Company Form 6/26 ကိုပြရပါတယ်။ Company License နဲ့တကွ MD ရဲ့ထောက်ခံချက်ပါ ပါရပါတယ်။ အဲဒီလိုစာရွက်စာတမ်းတွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ထိုင်းဗီဇာကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်…
(အဲဒီလိုပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားတွေလဲ မရှိဘူး။ ပတ်စ်ပို့တ်စာအုပ်ကလည်းအသစ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံကိုအခုမှစသွားမည့်သူတွေအတွက် ဗီဇာကိုရယူချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေ ၀န်ဆောက်မှုပေးနေပါတယ်။ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။)
← ယူအေအီးဗီဇာ အနည်းအကျဉ်းUnited Arab Emirate ကိုသွားမယ်ဆိုရင် →
One comment on “ထိုင်းဗီဇာဧ။် အနည်းအကျဉ်း”	မောင်မိုး says:	January 10, 2010 at 4:29 pm	ထိုင်းတွေလည်း လူပါးဝလာပြီ။ ဟိုတစ်လောတုန်းက မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ထိုင်းဗီဇာလျှောက်တာ သံရုံးက ဟန်းဖုန်းပိုင်ဆိုင်လားလို့ မေးတယ်။